China mkpuchi mkpuchi, nnyefe mmiri, UV ntutu isi ntutu isi na ndị na-emepụta ihe na-agbanwe agbanwe | Yongsheng
Ihe mkpuchi mkpuchi, nnyefe mmiri, UV na-ekpuchi ntutu eletriki eletrik na kwushin na-agbanwe agbanwe
Ihe: ABS ， roba ， naịlọn,
Azu ahịhịa na-agbanwe kwushin na naịlọn atụdo. Ma ị nwere ntutu isi, nke gbara ọkpụrụkpụ, nke gbara agba, nke mmiri ma ọ bụ nke akọrọ, Onye na-agba agba nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ na ụdị ntutu niile, jiri nwayọ na-apụ ka ị na-ehicha ya ogologo ntutu gị. Ọ gaghị adọta ma ọ bụ dọpụta, kama bristles gbara gburugburu ga-eji nwayọ ịhịa aka gị. Ọzọkwa ọ nwere ike nweta nsonaazụ salonlọ Mmanya ọkachamara n'ụlọ maka ngwa ngwa ma dị irè, zuru oke maka ịtọpụ na ịfụfụ iji kpoo ntutu gị site na mmiri ka ị kọọ. Na-ahapụ ntutu gị ka ọ dị nro, dị mma ma na-adọrọ adọrọ. Featuring omenala shapes haziri ka ịgbatị, volumize, detangle ma ọ bụ ịke mgbe ịmịkpọ ihicha, ha na-abịa Ifuru Mbipụta na anya swiiti agba. Debe ihe ngosi nke prọpị ya na mbara ala ya, nke na-agbanwe agbanwe na bọl bọọlụ, iji rụọ ọrụ ma nwee obi ụtọ na-ehichapụ na ịtọpụ. Ngwongwo ihu dị mma maka ogologo ogologo ogologo ma ọ bụ ntutu isi. Ikuku jupụtara na kwushin na-arụ ọrụ dị ka anụ ọhịa nke anụ ọhịa anụ ọhịa nke anụ ọhịa gị dị nro. Ihe mkpuchi a na-ekpuchi, nke gbara bristle na-enyere aka igbochi ntanye na nkwụsị ma na-eme ihe na-enweghị ike ịdọrọ.
Igwe ntutu dị egwu dị iche iche dị iche iche dị iche iche na nke ergonomic na-abụghị nke na-amị amị. Emebere ndị a n'ụzọ pụrụ iche nke kachasị iji njikwa na nkasi obi eme ya. Ọ dị mfe ịnweta nsonaazụ salonlọ Mmanya ọkachamara n'ụlọ na ahịhịa a. Nwere ike ịhọrọ ọtụtụ dị iche iche nke ịlesụ, oge gboo mfe mfe ahụ, ahụ na efere imewe, pụrụ iche udi e mere handle.
Nke gara aga: Ọkachamara ntutu ntutu gbara agba nwere oke nrụgide okpomọkụ n'ụdị dị iche
Osote: Ihe mkpuchi Rubber, UV eletrik, obibi akwụkwọ, nnyefe mmiri na-ewepu ntutu ntutu na Intelliflex bristles
Ike Bristle ntutu ahịhịa
Oghere ntutu isi
Agba ahịhịa ntutu ntutu
Ahịhịa ntutu Triangle
Ntucha ntutu ntutu
Rubber mkpuchi, UV electric, shinning obibi, w ...
Ọkachamara ntutu ntutu dị gburugburu na akwa tempera ...
UV electric, mmiri transfter, shinning ebi akwụkwọ h ...